Забур 138 CARS - Nnwom 138 NA-TWI | Biblica América Latina
Забур 138 CARS - Nnwom 138 NA-TWI
1Awurade, mifi me koma nyinaa mu meda wo ase. Meto wo ayeyi dwom wɔ anyame no anim. 2 M’ani kyerɛ wo fi kronkron no, kotow, kamfo wo din esiane wo dɔ a ɛwɔ hɔ daa no ne wo nokware nti, efisɛ woada no adi sɛ, wo din ne w’ahyɛde yɛ tumi. 3 Bere a mefrɛɛ wo no, wubuaa me; wonam w’ahoɔden so hyɛɛ me den. 4 Ahene a wɔwɔ wiase nyinaa bɛkamfo wo, Awurade efisɛ, wɔate wo bɔhyɛ no. 5 Wɔbɛto nea woayɛ ne w’anuonyam kɛse no ho dwom. 6 Ɛwom sɛ wokorɔn de, nanso wohwɛ wɔn a wɔwɔ fam pɛɛ no na ahantanfo rentumi mfa wɔn ho nhintaw wo. 7 Sɛ ɔhaw twa me ho hyia a, wugye me. Woko tia m’atamfo a wɔn bo afuw no, na wonam wo tumi so gye me. 8 Ɛbɔ biara a woahyɛ no, wubedi so; Awurade, wo dɔ wɔ hɔ daa.Wie adwuma a wafi ase no.
NA-TWI : Nnwom 138